WAR CUSUB: PSG Oo Haatanba Raadinaysa Bedelka Kylian Mbappe, Real Madrid Iyo Liverpool Oo Ay Farxad U Tahay & Barcelona Oo Ay Saamayn Doonto. - Gool24.Net
November 13, 2019 Apdihakem Omer Adem
Kooxda caasimada France ee Paris Saint-Germain ayaa lagu soo warramayaa inay haatanba ku jirto suuqa isla markaana ka fikirayso bedelka ugu haboon ee da’yarka kooxdeeda ee Kylian Mbappe kaas oo bixitaan lala xidhiidhinayo.
Xiddigan heer caalami ee xulka France ayaa halkiisa kasii wada inuu soo jiito heshiisyo waaweyn oo lacag badan ku qabsoomaya kuwaas oo lagu doonayo in horyaalka France lagaga kaxeeyo.
Xanta ayaa ah mid meesha keenaysa kooxaha Real Madrid iyo Liverpool oo labadaba lala xidhiidhinayo Mbappe halka ay sidoo kale saamayn dadban ku yeelan doonto Barcelona.
Aan ku horraynee Liverpool ayaa kaddib heshiiska ay la gaadhayso shirkada Nike lala xidhiidhinayaa inay samayn doonto isku dayga heshiiska Kylian oo ku dhawaad 250 Milyan ku qabsoomi kara.
Jamaahiirta Reds oo ah kuwa hoggaanka u ah rabitaanka 20 sano jirkan ayaa baraha bulshada dhawaan ku baahiyay hal ku dhiga ah #Mbappe2020 oo ka dhigan inay sanadka dambe saxeexa Mbappe samayn doonaan.
Dhinaca kale Real Madrid oo xagaagii dhawaa go’aansatay inay suuq kasta oo xagaa samayso saxeexa ciyaartoy weyn ayaa la sheegayaa inay awoodeeda dhaqaale oo dhan dul dhigi doonto Kylian bilaha June iyo July ee sanadka dambe.
Ugu dambayn, Sababta Barcelona soo dhex dhigaysa sheekada saddexdan kooxood ayaa ah in sida uu wargeyska Marca sheegay ay Paris Saint-Germian bedelka Mbappe ka dhex aragto Camp Nou oo ay u qorshaysatay Antoine Greizmann.